musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Musangano Weindasitiri Nhau » Nyowani NYC Chiitiko Nzvimbo neNew Sales Leader
Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Nyowani Wekutengesa Director paI Glasshouse chiitiko nzvimbo.
Glasshouses yakazivisa kugadzwa kwaKevin Ramsawack seMutungamiriri mutsva weZvekutengesa kwenzvimbo nyowani yeGlasshouse.
Iyo Glasshouse inzvimbo yakasarudzika yechiitiko muManhattan muNew York City iyo ichavhura munaGunyana wa2021.
Iyi nyowani yechiitiko ichashanda senzvimbo yekumberi yekambani.
Iyo nyowani Yekutengesa Director inounza anopfuura makore makumi maviri emakore echiitiko muindasitiri yechiitiko kunzvimbo yake nyowani panzvimbo ino nyowani.
Ramsawack ajoina timu yekutungamira yaJack Guttman, Alex Holiday naMegan Lerchenmuller kuvhura nzvimbo nyowani yekambani mu660 12th Avenue, New York City. Iyo nyowani yekumberi kwemvura Glasshouse inobatana nekambani yemakore gumi nematatu Glasshouse Chelsea, ichipa zviitiko zvechiitiko.
Kevin Ramsawack anounza anopfuura makore makumi maviri ezviitiko muindasitiri yechiitiko kubva pakubata kwake kwenguva refu kuNeuman's Kicheni chiitiko chakakosha uye vatengesi vemakambani muNew York nePhiladelphia. Munguva pfupi yapfuura Mutevedzeri Wemutungamiriri weZvatengesa uye Zviitiko, Ramsawack aive nebasa rekuronga zvine hungwaru uye kusimudzira bhizinesi pamwe nekutungamira kwekutengesa kwekambani, sevhisi, uye zvikwata zvekushambadzira.